Author: Zumi Yozshukus
Shirkan oo ay ka qeyb galeen ergo gaareysa saddex boqol oo ka kala yimid gobolada Soomaaliya ayaa waxaa la isku raacay in ugu dambeyn sannadka ka la soo gabagabeeyo dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
Nidaamka Doorashooyinka iyo Xisbiyada Shuruucda ku saabsan Xisbiyada, Diiwaangelintooda, Doorashooyinka heerka dowladda federaalka ah iyo Guddiga Qaranka ee Madaxbanaan ee Doorashooyinka, waxaa lagu qeexi doonaa shuruuc dasfuurka ah oo uu soo saaro Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Awoodaha Xeer-dejinta Golaha Shacabka Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xastuurka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah Dhaqangelidda Sharciyada Hindise sharci qabyo ssoomaaliya wuxuu dhaqan-gelayaa kaddib marka uu maro fastuurka sharci- dejinta ee ku xusan qaybtan, Madaxweynaha Jamhuuriyadduna saxiixolaguna soo saaro Faafinta Rasmiga. Hareeraha waxaa ka haya laba shabeel oo isu tusmaysan, kuna kala taagan labo waran oo isku weydaarsan caaradda hoose ee gashaanka, ayna weheliyaan laba caleen-cawbaar, diillin cadna ay ku qoofalan tahay. Magacaabidda Guddiyada Heer Federaal Habraaca Sharci-dejinta Baarlamaanka Qodobka 79aad.
Ku-dhaqanka sinnaanta, xorriyaadka iyo xuquuqda lagama sooci karo waajibaadka. Xasaanadda Xildhibaannada Golaha Shacabka Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha 1 Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo ama laga qaado xilka, madaxweyne-ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Xaqa Dacwadda iyo Isdifaaca Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah wuxuu leeyahay awood sharci- dejin oo ah: Xildhibaannada qaar ayaa sidoo kale soo-jeediyey, in inta mooshinka xilka-qaadista ee xildhibaanadu soo gudbiyeen barlamaanku uga codaynayaan sastuurka uusan sameyn karin qodobada soo socda:.
Your email address will not be published. Suggidda Amniga Jamhuuriyadda Federaalka 1 Xukuumadda Federaalku waxay damaanad-qaadaysaa nabadda, gobannimada iyo ammaanka qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo bedbaadinta shacbigeeda, iyadoo la adeegsanaayo adeegyada ciidammada amniga oo ay ku jiraan: Sidoo kale haddii aan laga helin oggolaansho Golaha Xildhibaanka lama qaban karo, xabsina laguma hayn karo iyadoo la fulinaayo xukun maxkamadeed oo xataa kama dambays ah.
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Skip to main content.
Qaab-dhismeedka Dawladda 1 Qaab-dhismeedka Dawladda ee Jamhuuriyadda Federaalku wuxuu ka kooban yahay 2 heer Dawladeed: Xilka Xeerdejinta ay wadaagaan labada Gole Kalfadhiyada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka 1 Golaha cusub ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka, fadhigiisa koowaad waa inuu ku qabsoomaa 30 maalmood gudahood, kaddib marka lagu dhawaaqo natiijada doorashada guud.
Xubnaha Guddiga Qaranka ee Madax-bannaan ee Doorashooyinka; 4. Log In Sign Up. Dhinaca kale qaar ka tirsan odayaashii dhaqanka Puntland ee ka qaybgalay kulankii furitaanka shirwaynaha Isimada Somaalida ee Muqdisho ka dhacay ayaa dhowaan dib ugu laabtay magaalada Garowe iyagoo sheegay inay saluugeen hanaanka ay wax u socdaan.
Awoodda Garsoorka Jamhuuriyadda Federaalka Golaha amaanka ee qaramada soomaalyia wuxuu cadeeyey walwal uu ka qabo in xukuumadda kmg ee somalia ay dib ug dhacday jadwalkii bishii ahaa in bisha August dalku uu yeesho dawlad rasmi ah oo joogta ah.
Qofna laguma qasbi karo in lagu sameeyo tijaabo takhtareed ama mid cilmibaariseed, haddii qofka ama xigtadiisa dhowi aynan oggolaanin islamarkaasina aysan jirin talo uu bixiyey xeeldheere caafimaad marka uusan qofku sharciyan awood u lahayn inuu wax oggolaado. Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka dastuuurka ee muddo xileedka Madaxweynaha. Guddiga dib-u-eegista iyo Hirgalinta Golaha Wasiirrada waa ay ka iman karaan xubin ka mid ah Golaha Shacabka iyo xubin aan ka mid aheyn Golaha Dastuufka.
October 1, Hindise sharci qabyo ah oo ka bilawday Golaha Shacabka Golaha Wasiirrada 1 Awoodda dastuurkw ee Jamhuuriyadda Federaalka ah waxaa leh Golaha Wasiirrada, waxayna u qabanayaan sida Dastuurka ku tilmaaman. Ka-qaybgalka Wasiirrada ee Fadhiyada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka 1 Wasiirradu waxay ka soo qayb-geli karaan fadhiyada, kana hadli karaan, iyaga oo aan cod ku lahayn.
Sidoo kale, ergada ka qeyb gashay shirka ayaa ku heshiiyay in marka la gaaro sannadka ka, la soo gabagabeyn doono sixitaanka, wax ku darka iyo wax ka bedelida qoddobada dastuurka.
Dhaqangelinta Xuquuqda Asaasiga Ah Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan.
Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee Ka jira Soomaaliya Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada. Awoodaha Xeer-dejinta Golaha Shacabka Golaha Shacabku ee Baarlamaanka Federaalku wuxuu matilaa dhammaan shacabka Soomaaliya, Awoodda sharci-dejinta ee Golaha shacabku keligii leeyahay waxaa ka mid ah: Xiriirka Shaqada 1 Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu helo xiriir shaqo caadil ah.
Curinta sharciyada 1 Sharci qabyo ah oo heer qaran ah, waxaa curin kara: Waxabarashada 1 Waxbarashadu waa xuquuq aasaasiga ah ee ay leeyihiin dhammaan muwaaddiniinta Soomaaliyeed.